म काम खोज्दैछु।
विदेशी विद्यार्थीले जापानमा रोजगार पाउने बारे जानकारी कसरी फेला पार्न सक्छ?
म विदेशी विद्यार्थी हुँ। म आंशिक-समय काम गर्न सक्छु?
म काममा घायल भएको थिए। म उद्योगी दुर्घटना भत्ता बीमाको लागि योग्य छु?
रोजगार बीमा भनेको के हो? विदेशी कामदारहरूले यो बिमामा सदस्यता लिन सक्छन्?
मैले महिनाको तलब प्राप्त गरेको छुइन। मैले के गर्नुपर्छ?
म काम गर्ने कम्पनीले मलाई अचानक निष्काशित गर्‍यो। मैले के गर्नुपर्छ?
मैले तीन वर्षसम्म काम गरेको कम्पनीले मलाई निष्काशित गर्‍यो। मैले रोजगार लाभहरू कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
तपाईंले समाचारपत्र, आदिमा वा विदेशीहरूका लागि नागोया रोजगार सेवा केन्द्र वा Hello Work मा काम खोज्न सक्नुहुन्छ। यी केन्द्रहरूमा जाँदा, तपाईंलाई आफ्नो निवासको स्थिति र बसाइको अवधि पुष्टि गर्न आफ्नो राहदानी र निवास कार्ड प्रस्तुत गर्न आवश्यक पर्नेछ।
तपाईंले Hello Work वेबसाइटमा पनि रोजगार प्रस्तावहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कार्यालय वा आफ्नो विश्वविद्यालयको भर्ना कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले भर्ना जानकारी पत्रिकाहरू हेर्न वा विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना सेमिनारहरूमा जान सक्नुहुन्छ। विदेशीहरूका लागि नागोया रोजगार सेवा केन्द्रले पनि तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ।
विदेशीहरूका लागि नागोया रोजगार सेवा केन्द्र https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-foreigner/
आंशिक-समय काम गर्नको लागि तपाईंले पहिले प्रदान गरिएको निवासको स्थिति अन्तर्गत अनुमति दिए बाहेक अन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुने अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक छ। तपाईंले हप्तामा 28 घण्टासम्म आंशिक-समय काम गर्न सक्नुहुन्छ (लामो-अवधि शैक्षिक बिदाहरूको अवधिमा दिनको 8 घण्टासम्म)।
पहिले प्रदान गरिएको निवासको स्थिति अन्तर्गत अनुमति दिए बाहेक अन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुन अनुमतिको लागि आवेदन (क्षेत्रीय आप्रवास विभागहरूमा उपलब्ध)
क्रियाकलापलाई अनुमति दिनुपर्ने भनी पुष्टि गर्ने कागजात(हरू) (तपाईंको निवासको स्थिति “विद्यार्थी”, “निर्भर” वा (केही मामिलाहरूमा) “नियोजित क्रियाकलापहरू” हो र तपाईंले विस्तृत अनुमतिको लागि आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने आवश्यक छैन)
यो आवेदन नागोया क्षेत्रीय आप्रवास विभागमा गर्न अनिवार्य छ। थप जानकारीको लागि, कृपया नागोया क्षेत्रीय आप्रवास विभाग वा आप्रवास जानकारी केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
विदेशी कामहरूलाई (गैर-कानूनी कामदारहरू सहित) उद्योगी दुर्घटना भत्ता बीमा अन्तर्गत भत्ता दिन सकिन्छ।विदेशी कामहरूलाई (गैर-कानूनी कामदारहरू सहित) उद्योगी दुर्घटना भत्ता बीमा अन्तर्गत भत्ता दिन सकिन्छ।
उद्योगी दुर्घटना भत्ता बीमाले काम वा यात्रा गर्दा रोग, चोट-पटक, अपाङ्गता र मृत्यु कभर गर्छ। कम्तीमा पनि एउटा कामदार भएको प्रत्येक कम्पनीले उद्योगी दुर्घटना भत्ता बीमामा सहभागी हुन उत्तरदायी छ। तपाईंको कम्पनीले तपाईंको लागि बीमा लागू गर्न अस्वीकार गरेमा, कृपया तपाईंको कम्पनी माथि सञ्चालन भएको मजदुर मानक अनुसन्धान कार्यालय वा आइची मजदुर विभागमा विदेशी कामदारहरूका लागि सल्लाह सेवामा सम्पर्क गर्नुहोस्।
विदेशी कामदारहरूका लागि सल्लाह सेवा
अनुसन्धान विभाग, मजदुर मानक विभाग, आइची मजदुर विभाग:
भाषा पोर्टुगिज (मङ्गलबार-शुक्रवार), अङ्ग्रेजी (मङ्गलबार, बिहीबार)
खुला 9:30–12:00, 13:00–16:00
टोयोहासी मजदुर मानक अनुसन्धान कार्यालय
भाषा पोर्टुगिज (मङ्गलबार-शुक्रवार)
कारिया मजदुर मानक अनुसन्धान कार्यालय
भाषा पोर्टुगिज (सोमबार, शुक्रवार)
नागोयानिसी मजदुर मानक अनुसन्धान कार्यालय
भाषा भियतनामी (बिहीबार)
रोजगार बीमाले कामदारहरूको रोजगार स्थिर गर्न र रोजगार नभएका कामदारहरूलाई स्थिर जीवन बाँच्न र नयाँ काम फेला पार्न बेरोजगार लाभहरू उपलब्ध गराउन लक्ष्य बनाउँछ।
यो विदेशी नागरिकहरू सहित जापानमा स्थापित व्यवसायद्वारा रोजगार दिइएका सबै व्यक्तिको लागि अनिवार्य छ। यद्यपि, यो हप्तामा 20 घण्टाभन्दा कम समय काम गर्ने आंशिक-कामदारहरू सहित छोटो-समय कामदारहरूका लागि लागू हुँदैन।
यो बीमा कार्ड रोजगारदाता मार्फत जारी गरिन्छ।
रोजगार बीमामा तपाईंले आफ्नो जागिर छाड्नुभएको 90-360 दिनका लागि उपलब्ध गराइएका आधारभूत लाभहरू समावेश हुन्छ। यी लाभहरूका लागि प्रक्रिया तपाईंले आफ्नो काम छोड्नुभएपछि गरिन्छ।
थप जानकारीको लागि कृपया आफ्नो नजिकैको Hello Work मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
मैले काम गर्ने कम्पनी ऋणमा डुब्यो र मैले मेरो महिनाको तलब प्राप्त गरेको छुइन। मैले के गर्नुपर्छ?
कामदारको लागि ज्याला भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जन संहितामा, भुक्तानी नगरिएका ज्यालाहरूका लागि दाबीहरूलाई अन्य दाबीहरूभन्दा प्राथमिकता दिइन्छ।
तपाईंले आफ्नो तलब प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, तपाईंले आफ्नो कम्पनी माथि सञ्चालन भएको मजदुर मानक अनुसन्धान कार्यालयसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं जापानी भाषा बोल्नुहुन्न भने, तपाईंलाई जापानी बुझ्ने कसैले मद्दत गर्न सक्छन्।
निम्न मजदुर मानक अनुसन्धान कार्यालयहरूले बहुभाषीय सल्लाहहरू प्रदान गर्छन्।
अनुसन्धान विभाग, मजदुर मानक विभाग, आइची मजदुर विभाग
भाषा पोर्टुगिज (मङ्गलबार-बिहीबार)
भाषा पोर्टुगिज (सोमबार, बिहीबार)
मजदुर मानक ऐनले यो प्रतिज्ञा गर्छ कि कामदारलाई निष्काशन गर्दा, कम्पनीले कामदारलाई कम्तीमा पनि सिद्धान्तमा निष्काशन गरेको मितिदेखि 30 दिनअघि निष्काशन बारे सूचना दिनुपर्छ।
कम्पनीले यसो गर्न असफल भएमा निष्काशन भत्ता भुक्तान गर्न आवश्यक छ।
खारेजका लागि केही कारणहरू अन्यायपूर्ण हुन सक्छन्। तपाईंलाई कुनै चिन्ताहरू भएमा, कृपया तपाईंको कम्पनी माथि सञ्चालन भएको मजदुर मानक अनुसन्धान कार्यालय वा आइची मजदुर विभागमा विदेशी कामदारहरूका लागि सल्लाह सेवामा सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईंले सूचना बिना काम छुटाउनुभयो वा खारेज हुने सूचना प्राप्त गरेपछि खारेज भत्ता वा पृथकत्व भुक्तानी प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईंले खारेज स्वीकार गर्नुभएको भनी मानिनेछ।
व्यक्तिगत कारणहरूका लागि जापानी कम्पनी छोड्दा वा खारेज हुँदा, विदेशी कामदारहरूले निम्न अवस्थाहरू पूरा गर्दा र Hello Work द्वारा प्रमाणित हुँदा बेरोजगार लाभहरू प्राप्त गर्न सक्छन्।
यद्यपि, रोजगार बीमाले निवासको स्थिति “अस्थायी पर्यटक” वा “इन्ट्रा-कम्पनी ट्रान्सफेरी” भएका मानिसहरूलाई कभर गर्दैन।
तपाईंले काम छाड्नुभएको मितिपछि दुई वर्षमा कम्तीमा पनि बाह्य महिनाको लागि रोजगार बीमाद्वारा तपाईंलाई कभर गरिएको छ (ऋणमा डुबेको, खारेज गरिएको वा रोजगार सम्झौता समापन भएको खण्डमा, काम छोडेको मितिपछि एक वर्षमा कम्तीमा पनि छ महिनाको लागि)।
तपाईंले आफ्नो काम छाड्नुभएको कारणले गर्दा तपाईंसँग उप्रान्त बीमा छैन भनी तपाईंले प्रमाणित गर्नुभयो।
तपाईं काम गर्न चाहनुभएता पनि तपाईंले काम फेला पार्न सक्नुभएन।
बेरोजगार लाभहरू प्राप्त गर्नको लागि, तपाईले Hello Work मा काम खोज्ने भनी दर्ता गर्न आवश्यक छ र लाभहरूका लागि योग्य भएपछि, नियोजित दिनहरूमा Hello Work मा जानुहोस् (प्रत्येक 28 दिन)।
विभाजन सूचना–1 र2(तपाईं बेरोजगार भएपछि रोजगारदाताद्वारा दिइने)
तपाईंको मेरो नम्बर (मेरो नम्बर कार्ड, सूचना कार्ड वा मेरो नम्बर भएको निवासको प्रमाणपत्र) प्रमाणित गर्ने कागजात
आइडी (मेरो नम्बर कार्ड, निवास कार्ड, आदि)
2 वटा फोटोहरू (3 cm x 2.5 cm)
तपाईंको नाममा भएको सामान्य बचत खाता पुस्तिका